सचिवालय बैठक सकिएलगत्तै किन पुगे ओली दाहाल शीतलनिवास ? - Sankalpa Khabar
5. ‘दोस्रो अध्यक्ष चाहिदैन, ओलीले दिन्छन् भन्ने विश्वास पनि छैन’: नेपाल
6. लुम्बिनीमा शेरचन र गण्डकीमा गुरुङ प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस
सचिवालय बैठक सकिएलगत्तै किन पुगे ओली दाहाल शीतलनिवास ?
३ श्रावण २१:४५
काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शनिवार साँझ भेटवार्ता गरेका छन। पार्टीको सचिवालय बैठक सकिएलगत्तै अध्यक्षद्वयले राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास पुगेर भेटघाट गरेका हुन।
भेटवार्ताका क्रममा मुलुकको समसामयिक विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ । नेकपाको शीर्ष तहमा देखिएको विवाद समाधानका लागि छलफल जारी रहेका बेला आज सचिवालय बैठकसमेत बसेको थियो । आजको सचिवालय बैठक सङ्कट समाधानका लागि सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको जनाइएको छ ।
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आजको बैठकले पार्टीमा देखिएको सङ्कट समाधान गर्न छलफल जारी राख्ने निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिए। शीर्ष नेताबीच सरकार र पार्टी सञ्चालनका विषयमा एकमत नहुँदा यसअघि पटकपटक स्थायी कमिटी बैठक स्थगन हुँदै आएको छ ।
निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि संक्रमण बढ्योः स्वास्थ्य मन्त्रालय
७ श्रावण १५:३६